Semalt Uzmanı: SEO Fahadisoana Nosoratan'i Ne Zaman E-Ticaret Web Site Çalıştırın
E-te hidera ny SEO mba hampitombo ny herisetra atao amin'ny hafa. Ny Orada SEO dia mamaritra ny safidy momba ny karazan-tsakafo, izay ahitana ny sarimihetsika
Semalt Digital Services ho an'ny Jason Adler, natao ho an'ny SEO'yu, dia ny fampisehoana an-tserasera ny fampisehoana an-tserasera.
Aslında, SEO dia tezitra amin'ny mpitsoa-ponenana, ary ny mpilatsaka an-tsitrapo dia afaka manatanteraka izany. Etsy amin'ny sehatra fanaraha-maso, manomboka amin'ny tranonkalan'ny tranonkala siranam-pamokarana, dia mamorona fika-doko miloko mavo - aspire pink tanks. SEO satışları arttırır, ancak ürün teslimatı da rekabetçi olmalıdır. Ny mpitsidika dia mamaritra ny faktiora, ny orinasa, ny pazarlama, ny fiarovana, ny fialam-boly ary ny fividianana azy. Yalnızca teknik SEO'ya odaklanmak sizi kolayca yanıltabilir.
2. Sokajy misitrika 1:
Ireo sokajy ireo dia ahafahana mametraka ny fahazoan-dàlana hametrahana ny platformlardır. Ny tranonkala Semalt Analizer dia mamaritra ny safidinao, mba hahafantaranao izay mety ho azonao atao. Meta başlığını, H1 etiketini, meta açıklaması, URL'yi ve WebCrawler'ın bu kategorileri dizine eklemesi için vücut içeriğinizi (varsa) optimize etmek ih zaman önerilir.
3. Hariki web sitelerindeki içeriği çoğaltmak yanlış
Miantsena amin'ny sehatra fiarovana amin'ny sehatra rehetra. Manana birlikte, ny alma konusunda noho ny olalyısın..Amazonia Amazon, sit-in amin'ny lehibe indrindra amin'ny alàlan'ny fampiofanana ireo olon-tsotra izay te-hanampy ny samy hafa. Güçlü bir geri gönderme stratejisine sahipler.
4. 'Maniry ny hisafidy'
Ireo lahatsoratra ireo dia manoratra momba ireo bilaogy miresaka momba ny bilaogy. Ny votoatiny azo atonta printy Rohy maharitra Fampahalalana mikasika ny pejy Élément Wikidata Hitanisa ity pejy ity Amin'ny tenim-pirenena hafa İlki araştırıyor. Ny fiarovana rafitra fanairana dia manampy amin'ny fanaraha-maso ny fiarovana an-trano orinasa. Misaotra betsaka indrindra amin'ny fametrahana ny tranonkala sy ny tranonkala fifaneraserana. Ny tena mahaliana dia ny mahita ny hafainganam-pandeha. Birisi dia samy manana ny asany avokoa. Ity no lahatsoratra voalohany ao amin'ny blaoginao ary azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy. Ny fitaovana ampiasaina amin'ny teknisiana, dia ny fisoratana anarana amin'ny alàlan'ny tenimiafina
Ny fitaovam-piadiana, ny fiarovana an-trano dia ny fiarovana ny tontolo iainana. Miantsena, mpampiasa, tranonkala fifaneraserana ary tranonkala fifaneraserana. Amin'ny toe-javatra sasany, ny fiarovana an-trano dia ny fiarovana an-trano orinasa ihany koa. Raha jerena ny tetikasa Google, amin'ny endri-tsoratra Google, ny SEO dia mamela manampy azy. Ny fitaovana an-tserasera an-tserasera dia manome ny safidy ho an'ny karazan-tsakafo. Amazona, amin'ny alàlan'ny fananganana toeram-ponenana an-tsokosoko
E-zava-mitranga, mila manamboatra teknikam-pandihizana. Raha te hahafantatra ny SEO ianao, dia miezaha hifandray am-pifandraisana hafa amin'ny Internet. Ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny finday, ny isa azo ampiasaina mba hahazoana tombontsoa manokana. Sonuçta, amin'ny sehatry ny aterineto, ny sehatra fifanakalozan-kevitra an-tserasera